Mbola tsy misy fitoniana
Vita ny amin’ny fananganana governemantan’ny marimaritra iraisana? Mba hilamina ahay amin’izay ny raharaha. Mirongatra ny hetsi-panoherana etsy sy eroa. Hanao ahoana? Ny tsy azo lavina, tsy mbola misy aloha izay fitoniana politika.
Ahina vao mainka ho sarotra sy hanahirana aza ny ny fitakiana ny fialan’ny filohan’ny Repoblika, ohatra; eny, na ny tsy fitoviam-pijerin’ny samy depioten’ny fanovana aza noho ireo voatendry ho minisitra… tsy mampilamina.
Mbola ifandroritana koa ny momba ny firosoana amin’ny fifidianana na tsia. Ao ny mitaky hatrany ny fanorenana ifotony aloha, na ny fampihavanam-pirenena… Mila fifampidinihana ary hanapahan-kevitra mazava: iza no hanao inona?
Hatreto aloha, tsy mbola azo antoka izay tena filaminana sy fitoniana maharitra. Tsy ilaozan’izay tsy afa-po sy manohitra hatrany. Mila tadiavina izay vahaolana iombonana sy mampiombona. Raha tsy izany, ho sasatry ny miarina eto.